स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर यसरी तानिँदै छ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर यसरी तानिँदै छ रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ
काठमाडौं । कोरोनाको जोखिमका कारण​ अन्योलमा परेको ललितपुरको रातो मच्छिन्द्रनाथको रथजात्रा छोट्याउने सहमति भएअनुसार आज रथलाई पुल्चोकको सोह्रखुट्टे पाटीसम्म तानिने भएको छ। यससँगै आज ललितपुरका बासिन्दाले छ्वयलाभू बनाउने भएका छन् ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर व्यवस्थित तरिकाले रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई अहिले राखिएको ठाउँबाट अलि पर तानिने भएको छ ।
अहिले गा बहालमा राखिएको मीननाथको रथलाई पुल्चोकसम्म तानिने छ। दुवै रथलाई तानेर सोह्रखुट्टे पाटीसम्म पुर्याइने जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले जनाएको छ ।
यसपालि साङ्केतिक रुपमा पाटनको गाःबहाल, सुन्धारा, लगनखेल र जावलाखेलसम्म एकैचोटी रथलाई तानिन लागेकोले गाः बहाल जात्रा व्यवस्थापन समिति, वछुत्वा नुगः जात्रा व्यवस्थापन समिति, लंगया बुंगद्यः जात्रा व्यवस्थापन समिति र जावलाख्यः जात्रा व्यवस्थापन समितिका ४०, ४० जना गरेर १६० जनाले रथ तान्ने भएका छन् । रथ तान्नको लागि उनीहरु आज दिउँसो ३ बजे गा बहालमा भेला हुने छन् । रथ तान्नेहरुको पहिचानको लागि काय्गुननी टोलले १६० वटा टिसर्ट र १६० वटा टोपीको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराइएको चार दिनमा पुल्चोकबाट तानेर गाः बहाल अनि मङ्गलबजार, सुन्धारा, लगनखेल र अन्त्यमा जावलाखेल पुर्याएर भोटो जात्रा गर्ने गरिन्थ्यो भने गा बहाल, सुन्धारा , लगनखेल र जावलाखेलमा रथलाई विश्राम गराएर पूजा गरिन्थ्यो । जावलाखेलमा भोटो देखाएपछि मूर्तिलाई बुङ्गमती लगिएसँगै जात्रा सम्पन्न हुन्थ्यो। यस वर्ष भने महामारीका कारण भोटोजात्रा नगरिने भएको छ ।
सोमबार भुज्या मनाउने तथा मूर्तिलाई बुङ्गमती लैजाने साइत हेरिनेछ भने साइत जुरेमा २६ गते रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्गमती प्रस्थान लगिनेछ ।
गायत्री मंत्र : ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् गायत्री मन्त्र […]
साहित्यकार तथा योगगुरु आचार्य राजन शर्मा ‘अनेसास सद्भावना दूत’ मा मनोनित
सिड्नी अष्ट्रेलिया,असनेपाल न्युज । अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) ले आचार्य राजन शर्मा […]
आल्मुनियममा खाना प्याक गर्नुहुन्छ ? कति छ हानिकारक !
काठमाडौं । आल्मुनियमको फाइल सहरी जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्दै छ । यसलाई खाना, तरकारी, मासु वा अन्य […]